Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iimveliso zePelican ziya kufunyanwa yiPlatinum Equity
Oktobha 19, 2021
I-Platinum Equity ibhengeze namhlanje ukutyikitywa kwesivumelwano sokufumana iiMveliso zePelican, inkokeli yehlabathi kuyilo nakwimeko yokukhuseleka kokusebenza okuphezulu kunye nezixhobo ezirhabaxa zabaqeqeshi kunye nabathandi bangaphandle, kunye nezisombululo zolawulo lobushushu ezilawulwa kumzi mveliso wezempilo.
Amagama emali awachazwanga. Intengiselwano kulindeleke ukuba igqitywe ukuphela kwekota yesine ka-2021.
I-Pelican isebenza kumacandelo amabini aphambili: Iimveliso zePelican ziyila kwaye zenze iimeko eziphezulu zokukhusela, iinkqubo zokukhanyisa eziphambili, kunye neemveliso zabathengi zangaphandle kurhulumente owomeleleyo, kurhwebo kunye neemarike zabathengi. I-Peli BioThermal ibonelela ngephothifoliyo ebanzi yezisombululo zepasile ezilawulwa ngobushushu kwizilingo ezikhula ngokukhawuleza kwiimvavanyo zeklinikhi kunye nakwiimarike zebhayopharma zorhwebo.
"Ngaphezulu kweminyaka engama-45 uPelican wakhe uphawu olunamandla kunye nodumo olufunyenwe kakuhle phakathi kwabathengi abanobunzima nabanyanisekileyo ngokwenza ezinye zezona mveliso zingenakonakala emhlabeni," utshilo uPartatinum Equity Partner uJacob Kotzubei. "Sizibophelele ekwakheni ubutyebi belifa lenkampani kunye notyalo mali ekuqhubekeni nokwenza izinto ezintsha."
Ikomkhulu leTorrance, CA, iPelican igcina iisayithi ezili-12 zokuvelisa, amaziko enkonzo ali-17 kunye nezikhululo zenethiwekhi, kunye neeofisi ezingama-23 zokuthengisa kumazwe angama-25.
"Ngokuveliswa kwehlabathi kunye nokusasazwa ngokubanzi, iPelican liqonga elivelele lokukhula kokufumana kunye nethuba elininzi kuzo zombini iimarike kunye namacandelo akufuphi," utshilo uMlawuli oPhetheyo wePlatin Equity uMatthew Louie. "Sijonge ukusebenza neqela lolawulo lwenkampani kwaye sisebenzise izibonelelo zethu zokusebenza kunye neM & A ukuxhasa inqanaba elilandelayo lokukhula nokwanda kwePelican."
Umphathi we-Pelican u-Phil Gyori uzakuqhubeka nokukhokela inkampani kulandela ukuthengiselana.
“Njengokuba siqhubela phambili sincediswa yiPlatinity Equity, ndiqinisekile ukuba indlela yokukhula kukaPelican izakuhlala yomelele, kwaye iimveliso zethu kunye neenkonzo ziza kwanda ukufikelela kwiimfuno zabathengi bethu abohlukeneyo,” utshilo uMnu Gyori. “Ndijonge ukuqengqa imikhono yethu, sisebenze neqela elinamava lePlatinam, kwaye senze isahluko esitsha esinomdla kwibali lasePelican.”
IGibson Dunn kunye neCrutcher LLP ibonelela ngomcebisi wezomthetho kwaye uWillkie Farr kunye noGallagher LLP babonelela ngeengcebiso ngezemali kwiPlatinum Equity ekufumaneni iPelican. Ukhuseleko lwe-BofA ngumbhali ophambili okhokelela kwimali yokuxhasa ityala.
I-Credit Suisse isebenze njengomcebisi wezezimali okhethekileyo kwaye iLatham kunye neWatkins LLP basebenza njengegqwetha kwezomthetho kwiiPelican Products.